QISO CAJIIB AH:- Sheekh Caalim ah ayaa hadda ka hor Booqday Dalka Shiihana.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 23, 2015, 6:39 pm
Sheekh Caalim ah ayaa hadda ka hor Booqday Dalka Shiihana, si uu Halkaa uga Bixiyo Cashar Taxane ahaa oo uu u Jeedinayay Urur Muslimiin ah oo Halkaa ku Noolaa. Haddaba, Maalin ayuu Qorshaystay inuu Cashar ka bixiyo meel ay ku kulmaan Ururka Muslimiinta ah, ka dibna Asagii iyo Dad Wehlinaayey waxa ay Kiraysteen Taxi si ay u gaaraan Halka uu Sheekhu ka jeedinayo Casharka.
Markii ay soo galeen Taksigii, Sheekhii waxa uu Weydiiyay Darawalkii ilaa iyo inta uu qaadanayo Safarka, kadib Darawalkii wuxuu u sheegay inuu qaadanaayo Safarka Laba saacadood, isla markiiba Sheekhii wuxuu la hadlay Dadkii la socday wuxuuna ku yiri:- Hagaag, mala Fadhinayno Darawalkaan ilaa Laba saacadood Anaga oo aan u sheegin waxa ay Diinteena Islaamka Nafarayso, haddii aan sidaa samayn Anaga iyo kuwa aan ahayn Muslimka oo Isticmaalay Taksigan waxba isma dhaano, waxaan nahay dadkii uu Allah u doortay inay Gaarsiiyaan Fariintiisa Dadka kale, waxuuna nagu Sharfay in aan noqono Muslim, waana Waajib na saaran in aan wax uga sheegno Diinteena Darawalkan.
Si waliba ay ahaato Darawalkii wuxuu ahaa Nin u Dhashay Shiinaha, mana jirin Luqad ay isku Fahmaan Sheekha, balse waxaa u kala Turjumaayay Dadkii la saarnaa Taksiga. Sheekhii wuxuu ku yiri Turjumaankii:- Waydii inuu Rumaysan yahay wax Diin ah ? Darawalkii wuxuu ku jawaabay:- Maya, ma Aaminsani wax Diin ah, waan soo kacaa Waaberigii (subaxdii) waxaan aadaa Shaqada, waan soo Shaqaystaa, ka dibna Galabtii waxaan isku Aruursadaa Lacagtii aan soo Shaqaystay, ka dibna waxaan Reerkeyga u soo Iibiyaa Raashin iyo Cabitaan, maxaan uga Baaha nahay Diin .
Sheekhii ayaa misana ku yiri Tarjumaankii:- Weydii haddii uu weligii mar Maqlay wax ku saabsan Diinta Islaamka? Darawalkii baa yiri:- Sidaa uma badna, Hadda ka hor mar baan Cajalad ka Fiirsaday, waa Dad aad u Ad-adag. Sheekhii:- Waydii Kombiyuuterka (Computer) muxuu ka Aaminsan yahay? Darawalkii:- Waxaan ka Aaminsanahay Kombiyuuterka (Computer) inuu yahay wax soo saare aad u Wanaagsan, si weenna loo Isticmaalo, aad ayuuna u Hormarsan yahay.
Sheekhii:- Ma wuxuu Aaminsan yahay Kombiyuuterka (Computer) inuu asaga isa soo saaray, ama wUxuu Aaminsan yahay in Bini-aadamka uu soo saaray Kombiyuuterka? Darawalkii:- Dabcan Bini aadamka ayaa soo saaray ma jirto Bir kaligeed isa soo saari karta .
Sheekhii:- Bini aadamka iyo Kombiyuuterka kee baa aad u Adag in la Fahmo ? Darawalkii:- Bini aadamka ayaa aad u Adag in la Fahmo? Sheekhii:- Gartay, Haddii Kombiyuuterka uu leeyahay Cid soo saartay oo ah Bini aadamka, waa inuu Raacaa Bini’aadamka oo ay Adag tahay inuu Fahmo, Sidoo kale Bini aadamka waa Qasab inay leeyihiin Cid Abuurtay? Darawalkii:- Hayeh, Gartay .
Sheekhii:- Islamka Dhexdiisa, waxaan Rumaysan nahay Allaah SW, inuu Abuuray Bini aadamka iyo Noolaha Dhamaantiis. Aan horay uga dhaqaaqno, Tusaale yar Haddii aadan weligaa Arag Kombiyuuter (Computer) oo aadan Maqal Cid ka hadleysa, ka dibna aan Aniga kuu keeno Kombiyuuter, oo aan ku siiyo Ma Fahmi lahayd waxa aad ku Qaban lahayd kombiyuuterkaas?, Mana Awoodi lahayd inaad Hesho Fursad aad ku Isticmaasho Kombiyuuterka Dhamaantiis ?
Darawalkii:- Maya, Marnaba ma Awoodi lahayn inaan Isticmaalo. Sheekhii:- Hadda, haddii aan ku siiyo Buug ay ku Qoran tahay sida aad u Isticmaali lahayd Komputerka, ka dib waxaad Awood u helaysaa inaad Isticmaasho Kombiyuuterka, Sow sax maahan? Darawalkii:- Haa waa Sax . Sheekhii:- Islaamka Dhexdiisa, Waxaan Aqrinaa Quraanka, wuxuuna noo yahay Tusmeeye (Halka laga Baaro wax kasta oo ku Saabsan Nolosha), waxaana u Isticmaalnaa Habka uu Bini’aadmaka u maarayn lahaa Nolashiisa, Haddii uusan jiri lahayna Quraanka Bini Aadamka wuu Baa’bi lahaa.
Haddaba soo Saaraha Kombiyuuterka Markuu Rakibay Mashiinka, uuna Daabacay Tusmeeyaha Kombiyuuterka (Catalog), Waa maxay Talaabada Xigta? Wuxuu u baahan yahay inuu Tababaro Xoogaa Injineero ah iyo kuwa kale oo sii Faafiya Fariinta uu Xambaarsan yahay Kombiyuuterka, Dadka Laftigooda, ayagana waa inay sii Tababaraan kuwa kale ilaa Dadka oo idil ka bartaan waxa uu ku saabsan yahay Mashiinka Kombiyuuterka.
Haddaba Tusaale ahaan Allaah SW iyo Quraanka Kariimka ah: Nabiyadu waxa ay u Matalayaan Injineero waxuuna Allaah SW baray Fariinta Islaamka, Ayagana waxa ay sii Bareen Dadka kale, Dadkiina waxay sii bareen kuwa kale ilaa Fariinta Islaamka ay ka gaarto Dadka oo idil. Nabi Muxamad CSW, waa Rasuulkii ugu Dambeeyay uu Allaah SW, ku Amray inuu Fariinta Islaamka gaarsiiyo Bini’aadamka Dhamaantiis. Haddaba, Intaas ka dib, waxey soo Gaareen Halkii uu Sheekhu ka bixin lahaa Casharka, balse Sheekhu wuxuu arkay Darawalkii oo Indhihiisa ka Daadanayso ilmo (ilmaynaayo), Erayadi uu Sheekhu ku yiri ayaa ula muuqday wax Cad oo wax ku ool ah (wax tar leh) .
Kadib Darawalkii ayaa yiri:- Fikradahaan aad ayay ii Xamaasad Geliyeen, Maxaad ka qabtaa mudo 15 daqiiqo ah haddii aad iiga sii Sheekaysid wax ku saabsan Diintaan? Sheekhiina wuu ka Aqbalay inuu la sii joogo muddo 15 daqiiqadood ah. Ninkii wuxuu Weydiiyay Sheekhii Su’aalo fara badan, waxuuna u Muuqday inuu si Sax ah u doonaayo inuu wax ka Ogaado Diinta Islaamka.
Sheekhii si aad u Fiican ayuu wax uga Fahamsiiyey Dawalkii Diinta Islaamka, isla markii Daraqalka wuxuu qaatay Go’aan ah inuu soo Islaamo, wuxuuna yiri:- Waxaan doonayaa in aan ku soo Biiro Diintiina? isla markiina Sheekhii ayaa u Qabtay Ashahadanka, sidaas ayuuna ku soo Islaamay Darawalkii.